Umbiko wakamuva wakwaGoogle ku-Android uqinisekisa ukunyamalala kwe-Android 2.2 Froyo | Izindaba zamagajethi
Umbiko wakamuva wakwaGoogle ku-Android uqinisekisa ukunyamalala kwe-Android 2.2 Froyo
Ngokuqala kukaJanuwari -Google ushicilele kabusha obekujwayelekile Umbiko we-Android, lapho kungadonswa khona izingcezu ezimbili zezindaba. Owokuqala wabo ukunyamalala kwe-Android 2.2 Froyo, ngemuva kobuhlungu obude, kanye ne- ukususwa kancane kwe-Android Nougat, efana nayo yonke inguqulo entsha ye-Android efika emakethe, ithatha okuningi ukuqala.
Njengakuwo wonke umbiko, i-Google isisinikezile imininingwane ethile yenguqulo ngayinye ye-Android emakethe, nokuthi sikukhombisa ngezansi nje;
Kuhlaba umxhwele ukukhula okuncane okuhlangabezane nakho ne-Android Nougat, okusuka ku-0.4% kuye ku-0.7%, futhi lapho sonke noma cishe sonke besilindele okunye okungaphezulu. I-Android Marshmallow isivele inesabelo semakethe esingu-29.6%, isuka ku-26.3%. Ngokuvamile, umhlaba we-Android uhlala unjalo, ngesabelo semakethe esiphakeme kakhulu sezinguqulo ebezisemakethe isikhathi esithile, kuyilapho okusha ekilasini njengoNougat kusazama ukuphuma.
Iyiphi inguqulo ye-Android oyisebenzisayo kuselula noma kuthebhulethi yakho?. Sitshele esikhaleni esibekelwe ukuphawula kulokhu okuthunyelwe noma nganoma yimaphi amanethiwekhi omphakathi esikhona kuwo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Izaziso » Umbiko wakamuva wakwaGoogle ku-Android uqinisekisa ukunyamalala kwe-Android 2.2 Froyo
NgoLwesihlanu oluzayo sizohlangana neNintendo switchch futhi lena yimidlalo esivele iqinisekisiwe
I-ASUS Zenfone 3 ivuselelwa ku-Android 7.0